Nosakanan’ny jiolahy: kamiao nivarina an-kady, telo namoy ny ainy | NewsMada
Nosakanan’ny jiolahy: kamiao nivarina an-kady, telo namoy ny ainy
Nisehoana lozam-pifamoivoizana indray tany amin’ny lalam-pirenena fahafito, afakomaly tokony ho tamin’ny 10 ora alina. Nivadika teo amin’ny tetezana misy helodrano, tokony ho 5 km tsy hidirana an’i Ranohira, ny kamiao iray mpitondra entana sy olona dimy tao anatiny. Voalaza fa nisy nanao sakana vato teo amin’ny arabe ka niala izany ny mpamily ary nivarina tany ambany tetezana.
Nandeha aloha ny lohan’ny fiara ka tery tao ny mpandeha teo aloha rehetra. Vokatr’izay, maty tao ny mpamily sy ny mpanampy azy ary ny mpandeha iray. Olona roa hafa kosa naratra vokatr’izany. Tapa-tanana ny iray, ny faharoa kosa, voadona teo amin’ny loha. Efa tamin’ny 5 ora hariva kosa ny ampitson’io vao voasokitra tao an-toerana ny razana miisa telo.
Kamiao avy any Benapy Betroka nitondra entana ho any Toliara ity niharan-doza ity. Saika hisy hanafika izy io izao niharan-doza izao. Tsy nipoitra ireo mpanafika raha nahita ny loza. Efa tonga tany an-toerana ny mpitandro filaminana nanao ny fanadihadiana. Tonga teny an-toerana ihany koa ny fokonolona nanampy tamin’ny famonjena.
Mbola misy ny fanafihana amin’ny lalam-pirenena
Mitranga hatrany ny fanafihana amin’ny lalam-pirenena amin’izao, ary anisan’ny farany tamin’izany ity nahatonga loza ity. Nisy ny fepetra noraisin’ny avy amin’ny ATT (Agence des transports terrestres) nidina tany amin’ny lalam-pirenena fahefatra sy fahenina nanara-maso momba ny fandriampahalemana eny amin’ny lalana. Tapaka tamin’izany fa nalana ireo fampihenana hafainganam-pandeha amin’ny faritra maizina sy mety hanjakan’ny dahalo. Antony nandraisana ny fepetra ao anatin’izao vanim-potoan’ny fialan-tsasatra izao. Mety hampihena ny fanafihana fiara izany, raha ny hevitr’ireo tompon’andraikitra. Andrasana ny mety ho fivoaran’ny toe-draharaha.